Home Wararka Dowladda Federaalka oo ciidan u direysa Baydhabo si ay u soo qabtaan...
Dowladda Federaalka oo ciidan u direysa Baydhabo si ay u soo qabtaan Roobow (Nog)
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka walaacsan musharaxnimada Mukhtaar Roobow ee xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, balse walaaca dowladda lama xiriiro inuu ahaa Al-Shabaab, sida ay dad badan qabaan.
Sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen MOL, dowladda federaalka aya qorsheynaysa in ay maalmaha soo socdo u dirto ciidanka gaashaan iyo ciidanka 14 Oktober magaalada Baydhabo iyadoo qorshaha uu yahay in ay soo xiraan Mukhtaar Robow. Ciidankan ay Mareykanka tababaraan ayaa waxa go’aankan la gaaray laba maalin ka hor markii uu MW Farmaajo la kulmay taliyaha ciidamada Mareykanka ee fadhigooda yahay magaalada Jabuuti.
Sida la rumeysan waxaa magaalada Baydhabo laga dareemaya xaalad isku diyaarin dagaal, waxaana taageerayasha Mukhtaar Robow iyo kooxda isbedel doonka ka go’an in ay la dagaalaan cid walba oo isku dayda in ay ka hortimaada musharaxnimada Roobow.Dowla
Robow waxa uu ku ol’oleynayaa kaar ammaan, isaga oo ballan qaaday mar uu isu soo baxayaal la hadlayey bishii Oktoobar: “Haddii aan guuleysto, waxaan cidhib tiri doonaa maleeshiyaadka Al Shabaab, burcadda xiran dharka dowladda iyo maleeshiyaadka kale ee qabaa’ila ee dhibta ku haya maamulkeena.”
Inta badan Soomaalida, in siyaasad ahaan loo dhaqan celiyo Robow waa mid waqti fog qaadaneysa. Dhammaan doodaha baraha bulshada waxa ay tixraacayeen weeraradii uu ka caawiyey Al-Shabaab.
Hase yeeshee, marka laga yimaado shakiga ay ka qabaan iyo midda dowladda, Roobow waxa uu qodax ku noqon karaa dhinaca Al-Shabaab, wuxuuna fursad u noqon karaa dowladda, sidaas waxaa aaminsan qaar ka mid ah fallanqeeyeyaasha siyaasadda.
Rashiid Cabdi oo ka tirsan kooxda xasarada caalamka ayaa ku dooday in haddii loo ogolaado in uu tartamo ay ay dowladda u noqon doonto tallaabo ay ku soo jiidato dagaalyahanno kale oo soo goosta.
“Dadka waxa ay u tahay dimuqraadiyad cusub,” ayuu yiri. “Haddii aysan abaalgud lahayn in dhinacan la yimaaddo, waxa ay dhiirigalineysaa in la dagaalamo ilaa laga dhimanayo.”
Robow wali si shaarac ah falcelin uma sameyn, laakiin, saacado kaddib markii uu gudiga doorashada u gudbiyey warqadihiisa doorashada, shan musharaxa ayaa u tanaasulay oo garabka ka taabtay.
“Dhammaan aqoonyahanada, dhallinyarada iyo ganacsatada Koonfur Galbeed waxa ay go’aansadeen in musharaxeennu Sheekh Mukhtar Robow yahay,” Xassan Xaaji oo ahaa musharax ayaa sidaas yiri kaddib markii ay gudiga doorashada ku dhawaaqeen xiilliga doorashada.
Previous articleGudoomiyihii hore ee Bangiga Dh. oo ka digay in laga horyimaado warbixnta Gudiga Maaliyadda
Next articleUrurka Al Shabaab oo la wareegay Deegaanka Goofgaduud Buureey
Dad weeraray deegaan Soomaalidu degto oo mareeykanka lagu maxkamadeeynaayo